Fambolen-kazo MAPAR sy Pro ANR: Mitsinjo sy miaro ny Tontolo iainana
samedi, 11 mars 2017 22:37
Tontosa anio asabotsy 11 martsa ny fambolen-kazo niarahan'ny MAPAR Ampitatafika sy ny Association Pro ANR, izay narahina korana fifampiharabana tratry ny taona tamin'ireo mpikambana maro.
Tao anatin'ny firaisankina tanteraka no nambolena ireo zanakazo miisa 500 fototra nifandrimbonana tamin'ireo tanora maro be anatin'ity fikambanana manohana ny filoha Andry Rajoelina ity, izay samy nitondra ny anjara birikiny ho fitandrovana sy fanajariana ny tontolo iainana.
Isan-taona dia manao hetsika fanentanana toa izao ny MAPAR araka ny nambaran'Andriamatoa Rakotozafy Robert, filoha mitantana ny vondrona ety Ampitatafika - Atsimondrano. Fampianarana ny ankizy sy ny tanora ho saro-piaro amin'ny fiarovana ny Tontolo iainana kosa no fanentanana nataon'i Ramatoa Eliane Doris Razafindrahamefy izay nitondra tenin'ny Pro ANR.
Nofaranana tamin ny koranam-pifaliana izay nanasana ireo mpikambana MAPAR/TGV ary ny solotenan'ny fikambanana mpiaradia amin'ny vondrona politika MAPAR moa izany hetsika izany ary natrehin'ny Birao nasionaly nahitana ny Minisitra teo aloha Augustin Andriamananoro sy ny Tomponan'andraikitra teo anivon'ny Kaominina Ampitatafika izay nanome ny fanomezan-dalana amin'izao fambolenkazo izao.